Omnisend: Madal Si Fudud Loogu Isticmaali Karo E-commerce Email & Suuq Geynta Gawaarida SMS | Martech Zone
Mid ka mid ah horumarka ugu xiisaha badan ee otomaatiga suuq geynta sanadkan, sidaan qabo, wuxuu ahaa hormarinta xalalka la awoodi karo si otomatig ah loogu suuq geeyo suuq geyntaada. Nidaamyada otomatiga ee suuqgeynta dhaqameed waa in la isku daraa ka dibna olole kasta oo la horumariyo waqti ka dib - hirgelinta waxay qaadan kartaa toddobaadyo ama bilo kahor intaadan bilaabin inaad aragto dakhliga.
Hadda, barnaamijyadan cusubi ma ahan oo keliya kuwo isku-dhafan oo wax soo saar leh, waxay leeyihiin ololeyaal diyaar u ah inay bilaabaan isla marka aad awooddo. Omnisend waa mid ka mid ah barnaamijyadan - oo leh ololeyaal badan oo kaamil ah oo diyaar u ah inay socdaan:
Taxanaha Soo Dhaweynta - Ku soo dhowow macaamiishaada cusub una beddel kuwa wax iibsada iyagoo wata xirmooyin diyaarsan oo emayllo saaxiibtinnimo leh.
Ka Tagaya Alaabta - La xiriir kuwa wax iibsanaya ee daawaday alaabada laakiin ka tagay dukaankaaga internetka adigoon iibsan.
Ka-tagga Cartha - Dib u soo cesho gawaarida badan ee laga tagay adoo adeegsanaya taxane horay loo dhisay oo leh fariimo otomaatig ah & fariimo SMS ah.
Dalbasho xaqiijin - U dir amar xaqiijin ah SMS ama emayl wata risiidh iibsi macaamiishaada isla marka ay iibsadaan ka dib.
Xaqiijinta Maraakiibta - Macaamiishaada sii dhoola caddeyn adigoo ogeysiinaya inuu amarkoodu ku socdo.
Is-iibin - Kaxee iibsiyo badan adoo soo jeedinaya alaabooyin badan oo lagugula taliyay oo ku saleysan amarradii hore ee macaamiishaada.
Madalku halkaa kuma istaago, Omnisend sidoo kale waxaa ka mid ah wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u dhexgaliso xogta dhinac saddexaad, shaqsiyeeyo, qayb, ololeyaal tijaabo ah, u hagaajiso iibkaaga, ugana warbixiso horumarkaaga:
Xayiraadaha Mawduuca Xaaladda - Ku dar oo soo bandhig khariidadaha iimaylka qaarkood si aad u dooratid qaybaha dhagaystayaasha.
Kala Qaybinta otomaatiga - Ku habbo dalabyadaada gaarka ah iyo dhiirrigelinta wadiiqooyin farriimo shaqsiyeed oo kala duwan isla hal shaqo socod ah.
Tijaabada A / B Split - Tijaabi si aad u aragto kanaalka, dhiirrigelinta, ama khadka mawduuca kugu wareejinaya badiyaa - oo samee go'aanno ku saleysan xogta si loo hagaajiyo socodkaaga shaqada.
Qaybta - Kala qaybso macaamiishaada iyadoo lagu saleynayo habdhaqankooda wax iibsi iyo waxyaabo badan oo guryaha ah si loo wanaajiyo beddelaad si fiican loo bartilmaameedsaday, emayllada shaqsiyeed, iyo qoraallada.
Talooyinka Alaabada - Isku-iibinta talooyinka firfircoon ee walxaha macmiil kasta waxay u badan tahay inuu iibsado.
Moobayl SMS - Kudar SMS iyo wadiiqooyin dheeri ah oo ku xigta emaylladaada adoo adeegsanaya isla barxadda isla markaana siinaya khibrad macmiil omnichannel joogto ah.
Foomamka - Popups, Exit Intent, Page Pages, Sanduuqa saxeexa, iyo foomamka Wheel of Fortune dhammaantood waa la dhisay si loo hagaajiyo helitaanka macaamiishaada.
Dulucda Diyaarka ah - Kudar sawirkaaga oo bilow bilow qabashada iyo dirida xiriirada isla markiiba!
Warbixinno Fariin Lagu Dhisay - La soco iibka iyo kaqeybgalka xogta si aad u hagaajiso socodkaaga shaqada adigoon ka tagin Tifatiraha otomaatiga.
Warbixinta otomaatiga - Si qoto dheer ugu quusto waxqabad kasta oo hawl socod ah si loo isbarbar dhigo wadiiqooyin kala duwan loolana socdo macaamiisha beddelay.
Warbixin horumarsan - Falanqee wadarta wadarta socodka shaqada iyo xogta kaqeyb galka iyo arag otomaatiyadaada ugu waxqabadka badan.
Compliance - Ku ururi macluumaad ogolaansho oo faahfaahsan foomamka waafaqsan TCPA & GDPR.
Omnisend waxay awood kuu siineysaa inaad si fudud uga faa'iideysato xogtaada xisbiga 3aad si aad u ballaadhiso baaxadda farriintaada gaarka ah. Samee hal abuur oo si fudud u dhis shaqooyinka caadiga ah adoo adeegsanaya dhacdooyinka gaarka ah iyo xogta ka soo baxda barnaamijyadaada daacadda ah & abaalmarinta, ka caawi miisaska, dib u eegista barnaamijyada, adeegyada raadraaca shixnadaha, iyo in ka sii badan intaad isticmaaleyso isla Tifatiraha otomaatiga
Iyada oo hal-riix madal ecommerce madal, taageerada 24/7 oo aad ufiican, iyo iskuduwaha xogta oo dhameystiran — waad badali kartaa & helikaraan otomaatiyadaada ugu horeysa kaliya 30 daqiiqo. Isdhexgalka Ecommerce waxaa ka mid ah 29 Next, BigCommerce, Magento, Gaari Furan, Prestashop, Soo iibso & Dukaan Dheer, Halqabsi, Iyo WooCommerce.
Codso Demo ama Bilaw Maxkamad Bilaash ah oo Omnisend ah
Shaacinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaasha xiriirka la leh Omnisend iyo aaladaha ecommerce ee qodobkan.
Tags: 29 XigaBigCommerceKa tagida gaadhigaemayllada ka tagida gawaaridaGawaarida ka tagida qoraalka moobiilkagawaarida sms ka tagidaecommercee-commerce iibinta iibinta emaylkaotomaatiga suuq geynta ecommercesuuq geynta ecommerceemsmerce smsmagentosuuq-geynta suuqafur furandalbo emaylka xaqiijintaPrestaShopemaylka ka tagida alaabtadirista emayllada xaqiijintaDukaan iibso & Soo iibso PlusGawaarida dukaanka oo laga tagomurugosoo dhawow email taxane ahwoocommerce
Suuq-kireyste: Xagee laga kireystaa Suuq-madaxbanaan Vetted Vetted